NewGenApps-DeepTech, FinTech, Blockchain, क्लाउड, मोबाइल, एनालिटिक्स
वेब र मोबाइल अनुप्रयोग विकास
सधैं अगाडि बढ्नुहोस्
तपाइँको गति बढाउनुहोस् डिजिटल परिवर्तन संग यात्रा NewGenApps
हामी काम गर्छौं
सेवाहरु को स्पेक्ट्रम को पेशकश
हामीले सँधै मेगाट्रेन्ड चाँडै, मोबाइल, क्लाउड, बिग डाटा, एआई/एमएल, ब्लकचेन, डीप लर्निंग, NoSQL, IoT, IIoT एनालिटिक्स र इनसाइट्स, GraphQL, कन्टेनर, Kubernetes, र अन्य धेरै को केहि नाम को लागी पहिचान गरेका छौं। धेरै थोरै गति र मापन को रूप मा हामी जस्तै गरीएको छ!
चीजहरु को इन्टरनेट
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँको घर तपाइँ वा तपाइँको कार संग कुरा गरीरहेको छ। ढोका प्रकाश स्विच संग कुरा गर्दै। महान! हैन?
हामी वेब एप्स को एक दायरा विकसित गर्दछौं कि आवश्यकता अनुसार कुशलता संग समस्याहरु को एक किसिम को समाधान गर्न सक्छौं।
iPhone, iPad, Android, Facebook र Google Apps लाई अनुकूलित गर्दछ अनुप्रयोग विकास
लगभग हरेक क्षेत्र मा विशाल चाहे यो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, निर्माण, आदि हो।
एमएल डाटा विश्लेषण को एक अभ्यास हो कि विश्लेषणात्मक मोडेल को निर्माण को मशीनीकरण गर्दछ।
शाखा कृत्रिम खुफिया उत्पादनहरु, बुझ्ने र भाषाहरु को विश्लेषण संग सम्बन्धित छ।
धोखाधडी पत्ता लगाउने, लागत घटाउने र को सहयोग संग अनुकूलित प्रस्ताव बिग डाटा एनालिटिक्स.
भेटी क्लाउड माइग्रेशन सेवाहरु, क्लाउड होस्टिंग सेवाहरु र IaaS/ PaaS।
वास्तविक वातावरणमा डिजिटल वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दै र वास्तविक जीवन अनुकरणहरू पनि सिर्जना गर्दछ
अनुप्रयोग भित्र यस्तो वातावरण सिर्जना गर्दछ कि यो वास्तविक दुनिया सामग्री संग मिक्स।
बिक्री कारोबार बढाउनुहोस्, अभियान प्रतिक्रिया दर बढाउनुहोस्, मार्केटि spend खर्च घटाउनुहोस्।
अमेजन वेब सेवाहरु
अमेजन वेब सेवाहरु, एक व्यापक बादल सेवा प्लेटफार्म प्रदान।
डाटा र तथ्या of्क को एक विज्ञान हो कि तपाइँ वरपर को दुनिया को उपायहरु को रुझान र जडान मा सार्थक अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न को लागी बनाउँछ। को प्रसार संग विशाल ब्याज को विषय ठूलो डाटा एनालिटिक्स उपकरणहरु असंरचित जानकारी को योग बाट ढाँचाहरु को पुनर्निर्माण को शक्ति दे।
कृत्रिम बुद्धि मानव र जनावरहरु द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक खुफिया को विपरीत, जो चेतना र भावनात्मकता संग सम्बन्धित छ, मिसिनहरु द्वारा प्रदर्शित बुद्धि हो। पूर्व र पछिल्लो कोटिहरु को बीच भेद प्राय: चुनेको संक्षिप्त द्वारा प्रकट गरीन्छ।
कम्प्यूटर एल्गोरिदम को अध्ययन हो कि अनुभव को माध्यम बाट र डाटा को उपयोग बाट स्वचालित रूप मा सुधार। एल्गोरिदम अनुप्रयोगहरु को एक विस्तृत विविधता मा प्रयोग गरीन्छ, जस्तै ईमेल फिल्टरि & र कम्प्यूटर दृष्टि मा, जहाँ यो मुश्किल वा पनी परम्परागत एल्गोरिदम को काम गर्न को लागी असम्भव छ।
सामाजिक मिडिया पेशेवरहरु को लागी आफ्नो दर्शकहरु र ग्राहकहरु संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी एक महान मंच प्रदान गर्दछ। सही उपकरण र सामाजिक प्रविधि को उपयोग गरेर, तपाइँ एक महान निम्न को विकास र एक सान्दर्भिक उद्योग व्यक्तित्व बन्न सक्नुहुन्छ।
यो दशक को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेक्नोलोजी मध्ये एक हो क्लाउड कम्प्युटिङ। बादल व्यवसाय मा माग मा सेवाहरु को एक किसिम प्रदान गर्न को लागी सक्षम छ, र पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु लाई नयाँ हार्डवेयर किन्न बिना यी सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
बिक्री उपकरणहरु तपाइँको प्रगति ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र उत्तरदायित्व को एक उपाय प्रदान गर्दछ कि तपाइँ उत्पादक बन्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको स्क्रिप्ट स्वचालित गरेर, तपाइँ गति जसमा तपाइँ सम्झौता बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको पाइपलाइन स्वचालित छ, र त्यसपछि यो प्राय: जाँच गर्नुहोस्।
Blockchain एक क्रान्तिकारी टेक्नोलोजी हो कि लेनदेन सजिलो र अधिक सुरक्षित बनाउन सक्छ। वर्तमान मा, दर जसमा मानिसहरु अनलाइन खरिद गर्न को लागी बढ्दै छ, र यो bots र वेबसाइटहरु को spamming मा वृद्धि को लागी नेतृत्व गरेको छ।
नियमित काम मा मानव निर्भरता कम गर्न को लागी परिष्कृत सफ्टवेयर समाधान को उपयोग संग नियम आधारित कार्यहरु को स्वचालन। CRMs, ERPs, पर्यवेक्षण बिना ग्राहक समर्थन मा डाटाबेस हेरफेर।
यसको उच्च मूल्यवान प्रोग्रामिंग संग टेक उद्योग हावी, chatbots मानव संग अन्तरक्रिया बुद्धिमान कुराकानी एजेन्ट हो। हामी चीजहरु लाई एक कदम अगाडी यसको आफ्नै बट्स, विशेष गरी सबै उद्योगहरु को लागी डिजाइन गरी विकास गरेर लिन्छौं।
हाम्रो परियोजना विशेषताहरू
हामी निर्माण र काम, बस्ने र संचार को लागी विकास। हामी स्मार्ट, समस्याहरु को लागी नयाँ समाधान, ठूलो र सानो खोज्न को इरादा संग परियोजनाहरु मा लिन्छौं।
हाम्रो कोर मान
मूल्यहरु हामी आधार बनाउन को लागी हो जसमा हामी काम गर्दछौं र आफैं सञ्चालन गर्दछौं।
हामी ध्वनि नैतिक र नैतिक सिद्धान्तहरु भएको र सही कुरा गर्न मा बिश्वास गर्दछौं, जो कोहि हेरिरहेको छ।
पहल संग एक व्यक्ति नयाँ चीजहरु गर्न को लागी प्रेरित छ। यदि तपाइँ पहल गर्नुहुन्छ, तपाइँ चीजहरु तपाइँको आफ्नै मा गर्न को लागी इच्छुक हुनुहुन्छ।
प्रत्येक एक को सकारात्मक विकास र पेशेवर को रूप मा व्यक्तिगत रूप मा सुधार को यात्रा।
यदि तपाइँ केहि गर्न को लागी इरादा हुनुहुन्छ, तपाइँ यो गर्न को लागी दृढ हुनुहुन्छ। यदि तपाइँसँग एक इरादा छ, तपाइँ एक उद्देश्य वा उद्देश्य छ।
नयाँ विचारहरु, नयाँ ढाँचाहरु र रचनात्मक सोच को तरीका लाई सामान्यतया चीजहरु लाई गर्न को लागी सुधार गर्न को लागी कार्यान्वयन।
किन छनौट गर्नुहोस् हामीलाई?
हाम्रो लागी, यो मात्र काम होईन - हामी समाधानहरु मा हामी गर्व गर्छौं र सन्तुष्ट छैन जब सम्म परियोजनाहरु हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत उच्च मापदण्डहरु लाई पूरा गर्दैनौं।
हामी जहिले पनि हाम्रो ग्राहकहरूको अपेक्षाहरू पार गर्न प्रयास गर्दछौं र तिनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्धहरू निर्माण गर्दछौं।
हामीसँग + ००+ कडा ग्राहक आधार छ।
हाम्रा केही ग्राहकहरू जससँग हामीले २०० 2008 मा काम गर्न सुरु गर्यौं हामीसँग अहिले पनि काम गरिरहेका छन, उनीहरूको एप्स स्टोर स्टोर र गुगल प्ले, ब्ल्ग र म्यागजिनहरूमा धेरै पटक देखा पर्‍यो।
औसतन, हामीसँग लगभग %०% दोहोरिएको व्यापार छ।
हामी मोबाइल अनुप्रयोगहरू विकास गर्दैछौं जबदेखि आईओएस र एन्ड्रोइड २०० develop मा विकासकर्ताहरूको लागि पहिलो पटक रिलीज गरियो।
हामीसँग उद्योग विशेषज्ञहरूको एक अनुभवी टीम छ जसले नयाँ टेक्नोलोजीहरू र कार्यविधिहरूको साथ अगाडि तपाईंको उद्यम पुनः आकार दिन सक्छ।
हामीले जटिल एपहरू पनि डेलिभर गरेका छौं क्लाउड समाधान जसलाई डोमेन विशेषज्ञता चाहिन्छ।
हामी डिजाइन, मोबाइल एप (नेटिभ, क्रस-प्लेटफर्म), वेबसाइट विकास र धेरै सेवाहरू प्रदान गर्दछौं क्लाउड समाधान ताकि तपाईले अन्य ठाउँमा फरक टोलीहरू खोज्नु पर्दैन। सम्झनु:
हामीसँग उनीहरूको टेक्नोलोजीमा विशेषज्ञ विषय (एसएमई) छन्।
हामी पनि पूरा गर्छौं क्लाउड कम्प्युटिङ Amazon Web Services (AWS) को माध्यम बाट तपाईका सबै व्यापार आवश्यकताहरु को लागी विश्वसनीय क्लाउड आधारित समाधान प्रदान गर्न को लागी।
हामी हाम्रो टी मा लगानीहाम्रा कर्मचारहरूको लागि निरन्तर मूल्या processes्कन प्रक्रियाहरूबाट प्रतिभाको आवश्यकताहरूको अगाडि रहनको लागि एलेन्ट पूल।
हामी हाम्रो टीमको सदस्यहरू राम्ररी स्क्रिन गर्दछौं जब हामी उनीहरूलाई भर्ती गर्दछौं।
हाम्रो टोली नियमित रूपमा विकासकर्ता सम्मेलनहरूमा भाग लिन्छ (जस्तै WWDC)।
हामी आफैंमा काम गरिरहेका टेक्नोलोजीहरूमा पछिल्ला उन्नतिका साथ हामी आफैंलाई अपडेट राख्छौं।
हामी बुझ्छौं यदि एक लगानीमा सकारात्मक आरओआई छैन भने लगानी लिनु हुँदैन।
उच्च गुणवत्ता, कम लागत समाधान अफशोर मोडेलको उपयोग।
द्रुत समय देखि बजार।
परिष्कृत टेम्प्लेटहरूको प्रयोग हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि हामीले विन-विन अवस्था सिर्जना गर्छौं र तपाईं उच्च रोइ पाउनुहुन्छ।
हामी हाम्रो टीमलाई नियमित पुनरावृत्ति मार्फत अप्रत्याशितताको जवाफ दिन मद्दतको लागि फुर्सद र अनुकूली परियोजना जीवन चक्र अनुसरण गर्दछौं।
हामी आफैलाई परिवर्तन गर्न र उच्च डिग्री को सहयोगको लागि अनुकूलन गर्न सक्छौं।
यदि तपाईं एक स्टार्टअप हुनुहुन्छ र हेर्न चाहानुहुन्छ कि कसरी तपाईंको उत्पादन प्रत्येक चरणमा विकसित हुन्छ, तब तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्रोडक्टको ट्र्याक राख्न सक्नुहुनेछ यसको विकासको प्रत्येक चरणमा।
तपाइँको लागी उत्तम समाधान व्यापार
म मेरो परियोजना संग धेरै खुसी थिए NewGenApps। टोली उत्कृष्ट छ। अत्यन्तै उत्तरदायी र जिज्ञासु। उनीहरु महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छन् र उत्कृष्ट सुझाव दिन्छन् विषय को बावजूद। म सधैं जान्दछु कि म राम्रो हात मा थिएँ र वास्तव मा मैले के मागेको छु- वा अझ राम्रो हुनेछ। संचार, टाढा छ, NewGenApps सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति। म सँधै एक स्पष्ट र स्पष्ट जवाफ प्राप्त गर्न को लागी सक्षम थियो। मँ पर्खनु पर्दैन वा एक उत्तर को लागी पेस्टर- यो सधैं तुरुन्तै आयो। टोली एक अविश्वसनीय काम नैतिक छ र उनीहरुका ग्राहकहरु को बारे मा धेरै धेरै ख्याल राख्छन्। म बिल्कुल संग धेरै काम गर्ने योजना बनाउँछु NewGenApps, र कुनै पनी एक अनुप्रयोग को निर्माण उही गर्न को सिफारिश। भयानक टीम जसले गुणस्तरीय काम उत्पादन गर्दछ। म सधैं कुनै पनि परियोजना को लागी पहिले NGA को लागी हेर्नेछु।
Milo संग भाषण
म मेरो परियोजना संग धेरै खुसी थिए NewGenApps। टोली उत्कृष्ट छ। अत्यन्तै उत्तरदायी र जिज्ञासु। उनीहरु महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छन् र उत्कृष्ट सुझाव दिन्छन् विषय को बावजूद। म सधैं जान्दछु कि म राम्रो हात मा थिएँ र वास्तव मा मैले के मागेको छु- वा अझ राम्रो हुनेछ। संचार, टाढा छ, NewGenApps सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति। म सँधै एक स्पष्ट र स्पष्ट जवाफ प्राप्त गर्न को लागी सक्षम थियो। मँ पर्खनु पर्दैन वा एक उत्तर को लागी पेस्टर- यो सधैं तुरुन्तै आयो। टोली एक अविश्वसनीय काम नैतिक छ र उनीहरुका ग्राहकहरु को बारे मा धेरै धेरै ख्याल राख्छन्। म बिल्कुल संग धेरै काम गर्ने योजना बनाउँछु NewGenApps, र सिफारिश गर्दछ कि जो कोहि एक अनुप्रयोग निर्माण एकै गर्न। भयानक टीम जसले गुणस्तरीय काम उत्पादन गर्दछ। म सधैं कुनै पनि परियोजना को लागी पहिले NGA को लागी हेर्नेछु।
आकाश इंटरएक्टिव मिडिया
Newgenapps मेरो परियोजना मा एक अद्भुत काम गर्नुभयो। टीम सबै क्षेत्रहरु मा अतिरिक्त माइल गए! उनीहरुको व्यावसायिकता, गहिरो प्राविधिक सीप, महान संगठनात्मक कौशल, महान संचार र अनुभवी टीम व्यवस्थापन यस परियोजना लाई सफल बनायो। प्रस्ताव बाट अन्तिम सम्म वितरण गर्न को लागी सबै - Newgenapps प्रतियोगिता उडायो। जब प्राविधिक चुनौतिहरु आए, टीम छिटो संकल्प विकल्प को पहिचान गर्न को लागी थियो र त्यसपछि स्पष्ट रूप बाट हाम्रो टीम संग सबै भन्दा राम्रो विकल्प मा निर्णय गर्न को लागी उनीहरुलाई सूचित गरीयो। Newgenapps ती क्षेत्रहरु मा महान शिक्षकहरु थिए कि हामी अनुभव को अभाव - हामीलाई आवश्यक प्रक्रिया को माध्यम बाट हिड्दै र कार्य छिटो र कुशलतापूर्वक पूरा गर्न को लागी। यो एक कम्पनी हो तपाइँ संग एक महान दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पनी उनीहरुलाई सिफारिश गर्दछौं र हामी संग काम गर्न को लागी तत्पर छौं Newgenapps हाम्रो अर्को परियोजना मा।
अद्भुत निर्माण गरौं!
बाट पछिल्लो ब्लग
नेतृत्व जेनेरेसन र रूपान्तरण दरहरू बढाउनको लागि पूर्ण गाइड
जनवरी 12 | बिक्री
4 कारणहरू किन तपाईंको वेबसाइट गुगलमा र्याङ्किङ गर्दैन र यसलाई कसरी समाधान गर्ने
जनवरी6| डिजिटल परिवर्तन
कसरी भिडियो सामग्रीले तपाईंलाई ब्रान्ड आवाज सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ
जनवरी4| सामग्री निर्माण, सामग्री मार्केटिङ, डिजिटल परिवर्तन
हाम्रो टोलीबाट भर्खरको समाचार र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न हाम्रो मेलिंग सूचीमा शामिल हुनुहोस्।